एप्पल आईक्लाउड | आईफोन समाचार
iCloud एक छ क्लाउड भण्डारण प्रणाली एप्पल ब्रांडेड उपकरणहरूका लागि विशेष। यसले फोटोहरू, संगीत, सम्पर्कहरू, क्यालेन्डरहरू, बुकमार्कहरू, नोटहरू र सामान्यतया सबै जानकारीहरू र हाम्रो आईफोनहरू, आईप्याडहरू, इत्यादिको कन्फिगरेसन भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ। आईक्लाउडको साथ तपाईं आइट्यून्स बिना गर्न सक्नुहुन्छ, क्लाउडमा तपाईंको सेटिंग्स बचत गर्न पुनर्स्थापना पछि सबै कम्प्युटरमा उपकरण जडान नगरी सामान्यमा फर्किनेछ। यहाँ हामी तपाईंलाई एप्पलले यस सेवामा गरेका परिवर्तनहरू र यो परिचय गराउने खबरहरू बारेमा बताउँछौं।
एप्पलले आश्चर्य दिन्छ र आईक्लाउड + लाई डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी 2021 मा सुरू गर्दछ
द्वारा परी गोन्जालेज बनाउँछ5महिना .
डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी 2021 समय आईक्लाउड र एप्पल आईडी लाई पनि समर्पित गरिएको छ। दुई नयाँ व्यक्तिको घोषणा गरिएको छ ...
द्वारा एलेक्स Vicente बनाउँछ 12 महिना .
एप्पल वन एक हप्ता भन्दा कम अघि रिलीज भएको छ। एप्पलको "All-in-one" सेवा जसमा एप्पल ...
इटालियन अधिकारीहरु आईक्लाउड, गुगल ड्राइव र ड्रपबक्स अनुसन्धान
द्वारा परी गोन्जालेज बनाउँछ 1 वर्ष .
न्याय र सक्षम अधिकारीहरूले यो सुनिश्चित गर्छन् कि कम्पनीहरूले उनीहरूको सेवाहरूमा निश्चित सीमा नाघ्छन्। धेरै ...
द्वारा लुइस प्याडिला बनाउँछ2वर्ष .
निश्चित रूपमा तपाईं धेरै जसलाई यो लेख पढ्नुहुन्छ र यस भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ भनेर त्रुटि सूचना पहिचान गर्नुहोस् ...
द्वारा करीम Hmeidan बनाउँछ2वर्ष .
यो सप्ताहन्तको प्राविधिक समाचार थियो, गुगल क्लाउड ...
द्वारा जोर्डी गिमेनेज बनाउँछ3वर्ष .
तिनीहरूसँग एउटा अपराध छ कि चोरीको साथै उनीहरूले तपाईंलाई तपाईंको आईफोन अनलक गर्न तपाईंको पासवर्डको लागि सोध्छन् ... ठीक छ, यस्तो देखिन्छ ...
एक उच्च माध्यामिक शिक्षकले सेलेबेटको साथ शुल्क पनि लगायो
यस्तो देखिन्छ कि यस क्षणमा, सेलेबेटले बोल्ने क्रम जारी राख्यो जब सिद्धान्तमा, कोठाको कैद पछि ...
२०१ George मा विभिन्न सेलिब्रिटीहरूबाट आईक्लाउड छविहरूको चोरीको आरोपमा गिरफ्तार भएका चार मध्ये एक जर्ज गाराफानो र ...
केही महिना पहिले, हामी यो खबर थियो कि एक समाचार को एक टुक्रा प्रतिध्वनि, र एप्पल यो पुष्टि, कि सबै ...
कसरी आईफोन वा आईप्याडबाट आईक्लाउडमा अधिक ठाउँ सम्झौता गर्ने
आईक्लाउड एक "हुनै पर्छ" भयो ताकि तपाईंसँग तपाईंको एप्पल कम्प्युटरमा सबै डाटा सुरक्षित रूपमा छन् ...
एप्पलले पुष्टि गर्दछ कि यसले गुगलको क्लाउड भण्डारण सेवाहरू प्रयोग गर्दछ
भर्खरका वर्षहरूमा, एप्पलले आफ्नै भण्डारण सर्भरहरू सुरू गर्न योजना सुरू गर्यो ...
आईफोनका लागि आईक्लाउड लकको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा
कसरी आईफोन फिक्स गर्ने जुन तपाईको आईक्लाउड प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड माग्दै छ
कसरी तपाईंको विश्वसनीय एप्पल उपकरणहरू परिमार्जन गर्ने
कसरी तपाईंको फोटोहरू स्थायी रूपमा आईफोन र आईक्लाउडमा मेटाउने
आईप्याडबाट आईक्लाउड खाता कसरी हटाउने